Akụkọ - Na-alụso ọnọdụ ntiwapụ nke ọrịa ọgụ
Na-alụso ọnọdụ ntiwapụ nke ọrịa ọgụ
Novel coronavirus, odeakwụkwọ kọmitii Party nke Nanchang, Xiong Yunlang, osote onye isi nke ọgbakọ ndị omeiwu a, Wu Xi, osote onye isi oche nke gọọmentị mpaghara ahụ, Wan Weiguo, osote onye isi oche nke ógbè CPPCC, Wan Weiguo, odeakwụkwọ nke kọmitii Party Party nke Sanjiang. , osote odeakwụkwọ nke Sanjiang town Party Committee na onye isi obodo Deng Biting, na ndị isi ndị ọzọ nke ụlọ ọgwụ obodo Sanjiang gara ụlọ ọrụ atọ nke ụlọ ọrụ Xinji Sanjiang n'ehihie iji nyochaa nrịanya oyi nke dugara ọrịa nke coronavirus ọhụrụ. Mgbochi ọrịa na njikwa njikwa, nyocha na ntuziaka nke ụlọ ọrụ ahụ ịlaghachi ọrụ tupu oge eruo, na-arụsi ọrụ ike ịhazi mmepụta ọgwụ. Ọ gere ntị na akụkọ nke Peng Yixing, onye odeakwụkwọ nke ngalaba otu izugbe na onye isi oche nke kọmitii ahụ, na Mao Zhiping, osote onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ.
N'oge nnyocha ahụ, odeakwụkwọ Xiong yunlang kwusiri ike ugboro ugboro na ụlọ ọrụ kwesịrị iwusi nchebe onwe ha ike dị ka ihe ndabere iji hụ na ahụike nke ndị ọrụ na ịnọgide na-enwe ụlọ ọrụ. Nde mmadu jikọtara dị ka otu nwoke, na coronavirus, anyị ga-arụsi ọrụ ike iji hazie mbido nke ngwaahịa ọgwụ ndị bụ isi, hụ na ahịa nke ngwaahịa ndị dị mkpa, kpuchido ahụike na nchekwa nke ndị mmadụ, ma gbalịa ịlụ ọgụ megide oyi baa kpatara ọrịa coronavirus ọhụrụ.